Junaid Hafeez: Nin lagu eedeeyay "inuu nabiga u gefay" oo dil lagu xukumay - BBC News Somali
Junaid Hafeez: Nin lagu eedeeyay "inuu nabiga u gefay" oo dil lagu xukumay
Amniga xabsiga uu ku xiran yahay Junaid Hafeez ayaa aad loo adkeeyay, halkaas oo ay ku taallo maxkamadd xukunta uu ka dhacay, balse wax sawir ah lagama hayo.
Bare jaamacadeed oo u dhashay Pakistan ayaa lagu xukumay dil toogasho ah ka dib markii uu "aflagaadeeyay" diinta.
Qareennada waaxda dacwadda ku oogtay ninkaas ayaa mac-macan loo qeybiyay ka dib markii uu xukunka dhacay.
Golaha qareennada ee hadda u doodaya Junaid Hafeez waxay sheegeen in xukunka uu yahay "mid nasiib darro ah", waxayna wakaaladda wararka ee AFP u sheegeen in ay racfaan ka qaadan doonaan.
Qareennada u doodayay waaxda dacwad oogidda ayaa dhankooda loo qeybiyay mac-macaan ka dib markii xukunka uu dhacay iyagoo ku dhawaaqayay "Allahu akbar" iyo "Ha dhinteen kuwa diinta caaya".
Hay'adda u dooda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International waxay sheegtay in xukunka uu "ugub ku yahay cadaaladda" waxayna ku tilmaamtay "niyad jab wayn iyo wax la yaab leh".
Pakistan waxay sharciga dhaxashay markii ay aasaasantay oo ay ka go'day Hindiya, sannadkii 1947-dii.
Xeerarkaas cusub ee uu ku daray waxay sharci darro ka dhigeen xushmad darrada ka dhanka ah Islaamka, waxaana la soo saaray xukun xabsi daa'in ah oo lagu xukumo "qofkii si ula kac ah" u wasaqeeya kitaabka Quraanka.
Xoogaa ka dibna, waxaa lagu daray in dil toogasho lagu xukumo ama xabsi daa'in la geliyo qofkii "aflagaadeeya" Nabi Muxamed CSW.
"Meel ka dhac loo gaystay Nabiga" NNKH oo horseeday iscasilaad wasiir
Illaa 40 qof ayaa hadda u xiran oo sugaya in lagu fuliyo dil ka dib markii lagu helay "in diinta ay wax ka sheegeen" - In kastoo illa iyo hadda aan la fulin midna.
Sharcigas wuxuu in muddo ah ahaa doodda beesha caalamka ka dib markii Asia Bibi, haweeney masiixi ah oo u dhalatay Pakistan, ay siddeed sano u xirnayd arrintaas oo ay sugeysay dil toogasho. Xabsiga waxaa laga sii daayay sannadkii tagay, ka dib go'aan maxkamadeed oo wax ka badalay xukunkii lagu riday.
Dhageyso, Ninka lagu eedeeyay in uu nabiga aflagaadeeyay oo BBC la hadlay
Dhageyso, Maxkamaddu Maxay u beriyeeshay ninka lagu eedeeyay in uu nabiga aflagaadeeyay?